Valley of the Waters B&B - Igumbi le-Cliff View - I-Airbnb
Valley of the Waters B&B - Igumbi le-Cliff View
Igumbi e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Martin
Ithuba elihle labantu abadala abangu-2 lokusuka kukho konke futhi bajabulele ukubukwa okuhle kakhulu e-Blue Mountains kusukela ekunethezekeni kwegumbi noma emphemeni. Ukubuka kwewa kunwebeka ku-100km ukunqamula ihlane elingaguquliwe eliyingqayizivele liyongena e-Southern Highlands! Kunesizathu sangempela esenza leli gumbi libizwe ngegumbi le-Cliff View! Wozani nizozibonela!
I-B&B ihlezi endaweni emangalisayo ekhuphukayo, ihlehlela ngqo e-Blue Mountains National Park, futhi inokubukwa okuhle kakhulu kwe-100km yamawa kanye nesigodi kuyo yonke iBlue Mountains. Itholakala nje ngeminyango emi-2 ukusuka e-Conservation Hut Cafe edumile, okuyisiqalo semizila ehamba phambili yezintaba. Ibanga elingu-2.5km kuphela ukusuka edolobhaneni laseWentworth Falls, futhi imizuzu eyi-10 kuphela ukushayela ukuya e-Three Sisters and Scenic World eKatoomba. 3 amakamelo ezivakashi zikanokusho, Cliff View ahlala abantu 2 ngalinye. Izivakashi zijabulela i-WIFI yamahhala e-B&B.
ubusuku obungu-7 e- WENTWORTH FALLS
Indawo Emangazayo Esohlwini Lwamagugu Omhlaba, i-B&B ngokoqobo isemnyango wehlathi elihle kunazo zonke lezintaba nemizila yezimpophoma ezihamba emahlathini, iminyango emi-2 ukusuka e-Conservation Hut Cafe edumile, imizuzu eyi-10 kuphela ukuya e-Three Sisters and Scenic World eKatoomba, futhi ibanga elingu-2.5km kuphela. kusukela edolobhaneni laseWentworth Falls nawo wonke amakhefi akhona nezindawo zokudlela!
Thina njengababungazi sihlala emagcekeni kodwa asikho se-B&B ngaso sonke isikhathi. Ukusebenzisana kukhawulelwe njengoba kunophiko lwesivakashi oluhlukene. Ababungazi baletha ukudla kwasekuseni ekamelweni lakho noma emphemeni njalo ekuseni.